UMantashe uthi eyokungasebenzi kwabantu inkinga yomhlaba - Bayede News
USihlalo we-African National Congress kazwelonke uGwede Mantashe uchaze izinga eliphezulu lokungasebenzi kwabantu ezweni njengengxenye yenkinga yomhlaba.
UMantashe uthe uHulumeni kumele adale indawo ezonikela ngamabhizinisi ukuze asize abantu baseNingizimu Afrika abangasebenzi. Lokhu njengoba isibalo sabantu abangasebenzi manje sesifinyelele ezigidini eziyisi-7,8 (abafuna ngenkuthalo imisebenzi) kunyangantathu wesibili wezi-2021. Lokhu kukhuphuka ngezi-584 000 uma kuqhathaniswa nonyangantathu wokuqala yowezi-2021.
Isifundazwe i-Eastern Cape siqophe amazinga aphezulu okungasebenzi kwabantu ngokusemthethweni. UMantashe owahambisa umkhankaso wokhetho loHulumeni Bendawo we-ANC waya eKimberley uthi akunakwenzeka ukuthi uHulumeni aqashe wonke umuntu waseNingizimu Afrika.
“UHulumeni kazwelonke kumele abe nesibopho sokwakha isimo sokungasebenzi. Kunezinto ezimbili okufanele uzenze uma ufuna ukubhekana nomsebenzi. Ungalokothi uthembise ukuthi uhulumeni uzoqasha wonke umuntu, ngoba ngeke kwenzeke. Kepha uhulumeni kumele adale indawo yokuthi abantu bathathe isinyathelo, bakhuthaze ezamabhizinisi. Uma uyibhizinisi elincane uqasha abantu ababili, ususe abantu ababili ekungasebenzini futhi ubakhuthaze futhi ubasekele. ENingizimu Afrika, amaphesenti ali-10% kuphela emnothweni wezwe iGDP oqhamuka emabhizinisini amancane naphakathi.”
Ukuntuleka kwemisebenzi kuphezulu kakhulu selokhu iStatistics South Africa yaqala ukulandela isibalo ngowezi-2008. Ucwaningo lwabasebenzi lwekota lonyaka lweStats SA lukhombisa ukuthi ukuntuleka kwemisebenzi kukhuphuke kwaya kuma-34.4% kunyangantathu wesibili walo nyaka, kusuka kuma-32.6% kunyangantathu wokuqala. OyiStatistician-General uRisenga Maluleke umemezele izibalo zikanyangantathu zakamuva ngoNcwaba.
Ucwaningo lukhombise ukuthi inani labantu abaqashiwe lehle ngezi-54 000 kwesesibili laya ezigidini ezili-14.9. Iphinde iveze ukuthi inani labantu abangasebenzi lenyuke ngo-584 000. UMaluleke uthe, “Izinga lokungasebenzi ngekota yesibili ngo-2021 – inani lalabo abaqashwe kwikota yokuqala yowezi-2021 lehlile kunyangantathu wesibili ngezi-54 000 abantu.
Isibalo sabangasebenzi sikhuphuke ngabantu abayizi-584 000 sisuka kubantu abayizigidi eziyisi-7.2 safinyelela kubantu abayizigidi eziyisi-7.8. Izinga labantu abangasebenzi eNingizimu Afrika kwikota yesibili ka-2021 lingama-34.4% lokhu kuphezulu kakhulu esesikubonile kusukela ngowezi-2008.”
Umhlaziyi wezomnotho nezabasebenzi u-Andrew Levy uthe, “Lokho kukhuphuka ngo-2.4% lelo yinani elikhulu kakhulu futhi kusobala ukuthi singakubeka lokhu esimweni sangemva kokhuvethe kanye nokudilizwa kwabasebenzi okuqhubekayo okubonakala kuwo wonke umnotho, ngokusobala nakho kubonisa lokho. umbono omubi kakhulu wezomnotho esibhekene nawo. Ngakho-ke sisonke sinxuse bonke abantu, uHulumeni, iminyango ebhekene nabasebenzi. ”